पायेक्का हात्ती - Shikshak Maasik
by • • हेराइ र बुझाइ • Comments (0) • 414
बुद्धकालीन प्रसंग हो । कोशल नरेश प्रसेनजितको पायेक्का नामको हात्ती हिलोमा फस्यो । बल, बहादुरी र चातुर्यका निम्ति नाम कमाएको पायेक्कालाई दलदलबाट निकाल्न केरा र उखु देखाएर लोभ्याउनेदेखि भाला र जंजीरले प्रहार गरेर डराउने–तर्साउनेसम्मका प्रयत्न भए । निस्कन हात्तीले पनि बल नगरेको होइन । तर, सबै प्रयास विफल भइरहेका थिए ।
राजाको हात्ती फसेको समाचार श्रावस्तीमै रहेको बुद्धको आश्रममा पनि पुग्यो । उक्त हात्तीका पुराना माउते, सरकारी जागिर सकिएपछि त्यही आश्रममा सत्संग गर्न आउने गर्थे । भगवान बुद्धको आग्रहमा ती माउते तुरुन्तै हात्तीको उद्धारका निम्ति प्रस्थान गरे ।
वृद्ध माउतेले पोखरीको चारैतिर घुमेर हात्तीको अवस्थाको जायजा लिए । अनि उनले युद्धका बाजा, विशेष गरेर बिगुल बजाउन आग्रह गरे । अचम्म ! बिगुलको ध्वनि सुन्ने बित्तिकै हात्ती फूर्तिका साथ पोखरीको डिलमा निस्कियो ।
एकाएक कसरी आयो हात्तीमा त्यत्रो ऊर्जा ? मानिसहरू छक्क परे ।
भोलिपल्टको सत्संगमा बिगुलको ध्वनिबाट हात्तीको उद्धार कसरी सम्भव भयो भन्ने व्याख्या गर्दै भगवान बुद्धले भन्नुभयो “राजा प्रसेनजितसँगै थुप्रै युद्ध लडेको त्यो हात्तीलाई बिगुलको ध्वनिले ‘ऊ एक महान् हात्ती हो, उसले आफ्नो पूरा ताकत र ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने दलदलबाट ऊ आफैं निस्कन सक्छ’ भनेर उसको स्वभाव र शक्ति स्मरण गराइदियो । मुख्य कुरा, व्यक्ति होस् या जीव– प्रत्येकमा तिनलाई चाहिने जति तागत र बुद्धि तिनीहरू भित्रै रहेको हुन्छ । शिक्षक, गुरु, सेनापति, माउते वा गोठालाहरूको काम त तिनलाई तिनकै क्षमता सम्झइदिने र प्रस्फुटनका निम्ति सघाउने मात्र हो । हाम्रा माउतेले पनि त्यही गरेका हुन् ।”